Haddii aad rabto inaad ogaatid sida aad uga mid noqon lahayd Amazon for keywords muhiimka ah ee muhiimka ah - aad horey u joogaa goobta saxda ah. Ma ogtahay in bogga ugu horreeya ee natiijooyinka raadinta ee Amazon uu ka badan yahay 60% guud ee raadinta guud ee ka imanaya dukaamada raagay raadinaya alaabta iibinta halkaas? Sidaa daraadeed, waxaa loola jeedaa inaad ku dhowdahay inaad ugu sareyso raadinta badeecada Amazon ee ereyada muhiimka ah iyo jumlado raadin dheer-dheer ah - iibka ugu badan ee aad u maleyneyso inaad ka faa'iideysan karto. Laakiin sida leysugu daro Amazon loogu talagalay ereyada muhiimka ah ee ugu muhiimsan, gaar ahaan haddii aad weli tahay iibiye asxaab ah oo kaliya oo qaadaya tallaabooyinka ugu horeeya ee suuqa xorta ah ee aadka u badan? Jawaabta gaaban waa - fahamka ereyada muhiimka ah iyo isbeddellada ugu muhiimsan ee laga arkay aragtida A9 deynta raadinta algorithm. Sidaas, waxaan hoosta ku socdaa inaan ku tuso sida aad uga mid noqon lahayd Amazon - adoo siinaya hage kooban oo ku saabsan keywords bartilmaameedka ugu muhiimsan iyo habka saxda ah ee lagu garan karo halkaa - 24 vip online casino. Sida loola qeybsado Amazon for Top Keywords
Ka hor inta wax kale, aynu ku dallacno si ay uula socdaan baaritaanka ereyga muhiimka ah Amazon sida saxda ah. Xusuusnow, waxay aasaas ka dhigeysaa aasaaska suurtogalka ah ee ku saabsan suurtogalkaaga ku saabsan Amazon. Waa kuwan qaar ka mid ah shuruudaha aasaasiga ah iyo sharaxaadaha aad ku fahmi karto sida aad uga taxadartid Amazon si aad u hesho keywords keywords bartilmaameedkaaga. Hubi inaad dhammaantood heshay:
Keywords - Calaamadaha muhiimka ah ee Amazon, laga eego aragtida SEO-ga iyo ganacsiga casriga ah ee ganacsiga, waxay noqon doonaan "gaaban" sifooyinka ugu muhiimsan ee sheyga iibka ama xiriirka guud ee qaybta alaabta. Qodobbada muhiimka ah ee muhiimka ah waa qayb muhiim ah oo ka mid ah hannaankaaga wax soo saarka ee Amazon wax soo saar.
Ereyada dhaadheer ee dheeraadka ah - u taagan ereyo gaar ah ama isku dhafan erayada muhiimka ah ee alaabooyinka dukaamadu ay u badan tahay in ay qaataan su'aalaha raadinta alaabta ee Amazon. Si fudud u dhig, ereyada muhiimka ah ee Amazon waa ereyada muhiimka ah ee loogu talagalay raadinta badeecada inta badan. Xaqiiqdii, gaar ahaan nooca ereyada muhiimka ah waxay ka kooban tahay qiyaastii 70% baaritaanada alaabooyinka ay sameeyaan dukaamada nool ee halkaa ka jira.
Taasina waa sababta ay muhiim u tahay in la aqoonsado xaqiiqda raadinta ee dheeraadka ah ee dheeraadka ah ee la xariira alaabtaada ku saabsan iibka ama qaybaha wax soo saarka. Habkaas, waxaad heli doontaa fursado wanaagsan oo lagu muujiyo dhagaystayaasha ballaaran ee dadka iibsadaha ah ee raadinaya alaabta lagu soo bandhigay iibinta halkaas. Kuwa kale, waxaan ku talineynaa isticmaalka qalabka cilmi baarista ee soo socda, gaar ahaan habka loo yaqaan 'ecommerce platform'.
Ganacsi Ganacsi ah - oo ah qalab wanaagsan oo lagu bilaabi karo cilmi-baaris caan ah oo ku saabsan Amazon, oo lagu caawiyo waxyaabo badan oo qiimo badan oo qiimo leh, oo si toos ah uga soo qaada sare iibiyeyaasha ku jira qaybtaada ama qaybta wax soo saarka.
Jungle Scout - waa dukaanka hal-joogga ah ee ganacsade kasta oo iibiya on Amazon. Marka laga reebo waxtarka dhabta ah ee faa'iido leh ee xogta muhiimka ah, Jungle Scout waxay caddaynaysaa inay aad u caawineyso marka la eegayo helitaanka fursadaha cusub ee waxsoosaarka, ama baahida loo qabo in la helo gabal qiime leh oo qiimo leh oo qiimo leh - labadaba waxyaabaha muhiimka ah ee faa'iido leh, isku-darka loo baahan yahay si loogu daro.